Namoaka ny vokatry ny fanivanana ao Azia ny OpenNet Initiative · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2019 8:42 GMT
Manomboka amin'ny Great Firewall hatramin'ny Myanmar Wide Web, fanta-daza amin'ny fombany manivana aterineto i Azia. Efa ela i Shina no nitarika tamin'ny fanakanana tranonkala, fanivànana tranonkala manerana ny faritra – manomboka amin'ny votoaty ara-tsosialy ka hatramin'ny votoaty ara-politika, pôrnôgrafia ary koa ny fitaovana amin'ny aterineto. Nanao fikarohana momba ny aterineto ao Azia sy manerana izao tontolo izao nanomboka tamin'ny taona 2002 ny OpenNet Initiative (famoahana feno: nandray anjara koa aho), ary vao haingana no namoaka ny tatitra farany momba ny fanarahamaso sy ny fifehezana ny aterineto any Azia, ary indrindra any Shina.
Ny fikarohana vaovao avy amin'ny OpenNet Initiative (ONI) dia mampiseho famerana henjana amin'ny votoaty antserasera, raha mitodika amin'ny fanarahamaso vaovao manaraka kosa ny governemanta Aziatika. Mihoatra noho ny fanakanana fidirana amin'ny tranonkala ireo teknika vaovao ireo ary tsy ofisialy sy misosa kokoa, ampiharina amin'ny fara-tampon'ny tambajotra, ary matetika tohanan'ny lalàna maneritery sy midadasika kokoa.
Araka ny fanambarana an-gazety navoakan'ny ONI vao haingana:
Hatramin'ny taona 2006, governemanta Aziatika maro no nahatsapa haingana ny tombontsoa mety azo amin'ny fampiasana ireo fahafahana hitarika paikady momba ny fampielezan-kevitra na seraseram-bahoaka amin'ny aterineto, eny fa na dia manafay ireo feo mahaleotena sy manakiana mirongatra any anatin'ireny tranonkala an-tserasera ireny aza- ohatra iray amin'ny fivoaran'ny fanarahamaso vaovao hoavy”, hoy i Ron Deibert, talen'ny Citizen Lab ao amin'ny Oniversiten'i Toronto ary iray amin'ireo mpanadihady fototra efatra ao amin'ny ONI.
Ireo fanarahamaso ireo dia nohazavaina vao haingana tao amin'ny fanadihadian'ny ONI momba ny fanandramana nataon'i Shina farany tamin'ny fifehezana ny fivezivezen'ny fampahalalam-baovao, ny rindrambaiko fanivanana Green Dam Youth Escort natao ho an'ny “vonona-hapetraka” amin'ny solosaina amidy ao Shina manomboka amin'ny 1 jolay. “Na izany aza, na dia ny ohatra asehoan'i Shina aza dia mampiseho fa ho ela vao hahomby ny famerana ny vaovao, ary hiharan'ny fanoherana sy hotoherin'ny vondrona tsirairay kasain'izy ireo tampenam-bava”, hoy i Rafal Rohozinski, Tale Jeneralin'ny SecDev Group ary mpiara-manorina sy mpanadihady voalohany ao amin'ny ONI sy ONI Asia.
Ny tatitra ho an'i Azia, sy Burma, Shina, Pakistana ary Korea atsimo dia ho avokan'ny MIT Press (2010) amin'ny fizarana manaraka: Access Controlled: The Shaping of Rights, Rule, and Power in Cyberspace (Fidirana voafehy: Famolavolana ny zo, ny fitsipika sy ny tanjaky ny aterineto). Ny “Access Controlled” dia ahitana andiana toko misy fanadihadiana sy fomba fijery ara-paritra izay mandray anjara amin'ny adihevitra fampandrosoana manodidina ny sivana sy ny fitsipi-pifampifehezan'ny aterineto manerantany izay noresahana tamin'ny fizarana voalohan'ny ONI: Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering (Fidirana sakanana: ny fomba fanao sy ny politikan'ny fanivanana aterineto manerantany), (Cambridge: MIT Press) 2008.